Nnwom 81:1-7 NA-TWI | Biblica
Nnwom 81:1-7 NA-TWI
To ahosɛpɛw dwom ma Awurade, yɛn hwɛfo. To ayeyi dwom ma Yakob Nyankopɔn.
Mumfi nnwonto no ase na mommɔ mpintin. Mommɔ nnwom a ɔyɛ dɛ wɔ sanku ne bɛnta so. Monhyɛn torobɛnto mma afahyɛ no bere a ɔsram apue foforo na wanyin no. Eyi yɛ Israel mmara; ɛyɛ mmara a efi Yakob Nyankopɔn nkyɛn. Bere a okotuaa Misraim asase no na ɔhyɛɛ mmara no maa Israelfo. Metee nne bi a minnim na ɛka se, “Miyii nnosoa no fii mo akyi. Mema mosoɛɛ mo ntayaa no. Bere a mowɔ ɔhaw mu no, mofrɛɛ me, na migyee mo nkwa. Mifii me hintabea a ɛwɔ ahum mu no gyee mo so. Mesɔɔ mo hwɛe wɔ Meriba nsu ho.
Read More of Nnwom 81